सञ्जु बजगाईं, (ब्रसेल्स, बेल्जियम)
हुनत हो, एम्बुसमा परेर चिन्न नसकिने भएको सरोजको लाशलाई बटुलेर ल्याउन सहयोग गर्नेमध्येको एक मेघ शर्मा थियो । काजक्रिया नसकिन्जेल दिनमा एकपटक भेट्न आउँथ्यो । साथी हुनुको कर्तव्य पूरा गरेको थियो । त्यसपछिका दिनहरूमा पनि उसको उपस्थिति बाक्लै भैरहन्थ्यो । आर्थिक सहयोग पनि गरेको हो उसले । बैगुनी कसरी मान्ने ? ज्योतिले पनि असल नै भनी । तर चित्त नबुझ्ने नाता जोड्न कसले मान्छ ? मेघ शर्माको प्रस्ताव उसले अस्वीकार गरी । बसन्ती भाउजूले त मुखै भनिदिएकी– “कहिले पालो आउला र खाउँला भनी बसेको कि क्या हो ?”
“बकिङ्गहम प्यालेस ठूलो हुनसक्छ तर व्यक्तिको मानसिकता बकिङ्गहम प्यालेस जत्रै होला भन्ने म मान्न सक्दिनँ ।” तर्क गर्न नआउने भए त्यत्रो पोष्ट कसरी सम्हाल्थ्यो ? तर्क बोल्यो उसले ।
brilliant story I like it